Koety: Tapitra Ve Ny Fahavaratra? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2018 16:42 GMT
Miresaka mikasika ny fanakanana iray hafa ao Koety i Intlxpatr – ary amin'ity indray mitoraka ity ny melamine no lasibatra.
Nahita gazetiboky iray vaovao mikendry ny Filipiana ao Koety i Ana Filibini, Filipiana iray mipetraka ao Koety. Manazava ny zavatra niainany in-dray Zoma izay tao an-drenivohitra ihany koa izy.
Resahan’ i Bashar avy ao amin'ny BlogAllAlong ny mikasika ny zavatra mampihomehy hitany tany amin'ny trano fivarotana lehibe – DVD tsy ara-dalàna !.
Nahita zavatra vaovao hatao any Koety i yo_ghurt ao amin'ny stillkuwaiting – ary ahitana fadraketana an-tsary maro be izany!
Manasongadina tsy fahampiana iray hafa ao anatin'ny gazety ao Koety indray i Forzaq8 ary manazava ny antony tsy inoany azy ireny intsony.